Ò nwetụla mgbe ị na-eche ihe ma ọ bụrụ na ihe ndị ị na-ehichapụ gị iPhone nwere ike natara? Ma i nwere chetụla ma ọ bụ, ọ bụ omume na-agbake ehichapụ ihe si gị iPhone. Ọbụna mgbe ihichapụ ozi gị, oku na ndekọ, kọntaktsị, kalinda, wdg si gị iPhone, ha na-agaghị n'ụzọ zuru ezu ehichapụ n'ihi na ihe nile ọ nwere ike hụrụ na natara na ọtụtụ nke mgbake software dị taa.
Gịnị ma ọ bụrụ na i kpebie na-ere gị iPhone ma ọ bụ nye ya ihe ka onye ma na ị chọrọ ka kpamkpam ihichapụ faịlụ na-enweghị na-ahapụ ha dị ka-natara? Ọfọn, e nwere ihe ngwọta maka nke ahụ. E nwere nanị ole na ole software si n'ebe, na ike na-adịgide adịgide ihichapu gị data Ma nke kacha mma n'etiti ha bụ Wondershare SafeEraser!
Wondershare SafeEraser bụ software akpan iji ihichapụ data gị iPhone kpamkpam na-enweghị ihe ọ bụla ga-ekwe omume nke na-ha gbakee. Na Wondershare SafeEraser, i ji n'aka na ihe ọ bụla ị ihichapụ taktak. N'agbanyeghị ihe technology na-eji, ndị data ehichapụ na Wondershare SafeEraser nwere ike mgbe-hụrụ, ọtụtụ obere bụ Ohere nke na-agbake ha. . Ọ bụ ihe kasị mma software ihichapu onye data dị ka ozi, oku na ndekọ, wdg ma ọ bụ ekwentị gị ka a dum. Wondershare SafeEraser-akwado ndị niile data na ngwaọrụ gị dị ka ozi kọntaktsị, foto, videos, ngwa ọdịnala, akaụntụ Ama, okwuntughe na onwe onye ndị ọzọ data ịchekwa na gị iPhone. O nwere ọtụtụ ịrịba atụmatụ dị ka e depụtara n'okpuru ebe a.
Mfe ma dị mfe iji interface: Ihichapu gị iPhone na otu Pịa.
Chebe gị onye faịlụ: Kwụsị njirimara gị si ịlụ zuru.
-Akwado ndị niile na onye ọrụ data: Nkwado ngwa, ozi, foto, videos, kọntaktị, ozi akaụntụ, okwuntughe na ndị ọzọ.
Adị n'elu gị iPhone: Hichapụ enweghị isi junk mee ka gị na ngwaọrụ kpu oru oma.
Kpamkpam ihichapu data:-adịgide adịgide ehichapụ na-apụghị gbakee.
Foto dị Compressor: Nye ngwaọrụ gị ọzọ ohere na-enweghị tempering na àgwà nke foto.
Fast erasing Speed: Unu ga-echere ruo ogologo oge.
Olee otú iji Wondershare SafeEraser Iji hichapụ ihe niile na-adịbeghị anya ọrụ na iPhone
Nzọụkwụ 1: Jikọọ iPhone na-emeghe Wondershare SafeEraser.
Nzọụkwụ 2: Pịa na 1-Pịa nzacha na mkpocha nhọrọ na isi SafeEraser window.
Nzọụkwụ 3: Chere maka SafeEraser na-akpaghị aka iṅomi ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 4: Mgbe scanning zuru ezu, ngụkọta ego nke junk faịlụ ga-egosipụta. Pịa "nzacha na mkpocha" na ala nke SafeEraser window onwe elu ngwaọrụ gị ohere.
Hụ na ị na Akwụpụla ngwaọrụ gị n'oge usoro na nke kacha mma N'ihi.
Mgbe usoro zuru ezu, ị ga-ahụ window egosipụta dịnụ ohere ọmụma nke ngwaọrụ gị.
Olee otú aka ihichapụ na-adịbeghị anya kọntaktsị na iPhone
Nzọụkwụ 1: Mepee ekwentị ngwa gị Home ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ ana-akpọ taabụ na ala nke na ngwa.
Nzọụkwụ 3: Gaa na kọntaktị ị chọrọ ka ihichapụ na enweta na ya.
Nzọụkwụ 4: Kpatụ Dezie na n'elu aka nri nke ngwa.
Nzọụkwụ 5: Pịgharịa gaa na ala nke ngwa na enweta Hichapụ Kpọtụrụ.
Nzọụkwụ 6: Kpatụ Hichapụ Kpọtụrụ otu ugboro ọzọ si mmapụta elu window iji gosi na ihichapụ kọntaktị.
A nwere ike mere dị ka ọtụtụ kọntaktị dị ka ị chọrọ.
Olee otú aka-ewepụ na-adịbeghị anya si iPhone ozi
Nzọụkwụ 1: Mepee Ozi ngwa si gị Home ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Kpatụ Dezie na n'elu aka ekpe na họrọ ozi ị chọrọ ka ihichapụ. Enweta Hichapụ na ala nri mgbe nhọrọ.
I nwekwara ike jide na slide ozi ị chọrọ ka ihichapụ n'aka-ekpe. Enweta Hichapụ na nri njedebe nke ozi ka ihichapụ ozi. Lee foto n'okpuru.
Olee otú aka ihichapụ na-adịbeghị anya oku na-iPhone
Nzọụkwụ 2: Kpatụ-adịbeghị anya taabụ na ala nke na ngwa.
Nzọụkwụ 3: Kpatụ Dezie na n'elu aka nri nke ngwa.
Nzọụkwụ 4: Kpatụ red button n'akụkụ oku log ị chọrọ ka ihichapụ. Ikpochapụ niile oku na ndekọ, enweta Doro Anya na n'elu aka ekpe nke ngwa.
I nwekwara ike ihichapụ a oku log nanị site ejide na eji oku log ị chọrọ ka ihichapụ. Enweta Hichapụ na nri njedebe nke log. Lee foto n'okpuru.
> Resource> Ihichapu> Olee otú iji Hichapụ-adịbeghị anya na iPhone